आर्यन र साम्राज्ञीको ‘कायरा’ ले शो कति पायो ? « Ramailo छ
आर्यन र साम्राज्ञीको ‘कायरा’ ले शो कति पायो ?
‘कायरा’ ले मल्टिप्लेक्समा शोसँगै देशभर हल संख्या पनि सर्वाधिक पाएको छ । वितरक सुनिल मानन्धरका अनुसार राजधानी तथा मोफसल गरेर ‘कायरा’ले झण्डै ८० वटा हल पाएको छ । उसो त आर्यन र साम्राज्ञीको ‘कायरा’सँग बलियो नेपाली फिल्म जुध्दैछैन् भने बलिउडको फिल्म पनि बहुप्रतिक्षित छैन् । आर्यन र साम्राज्ञीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :